Kusolwa Ukuhlukuluzwa Kwabesifazana Elizweni
Mbimbitho 08, 2013
Abesifazana abaqoqwe yinhlanganiso yeWomen’s Coalition of Zimbabwe bazatshengisela ngoMgqibelo eRugare eHarare besola ukuhlukuluzwa kwabanye babo
WASHINGTON — EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe womhlaba ekunanzeni usuku lwabesifazane i ‘International Women’s Day’ ngolweSihlanu kule nkuthazo yokuthi abezomthetho baqhube umsebenzi wabo ngendlela enceda abahlukuluziweyo njalo kujeziswe abephula umthetho.
Omunye wemikhosi yokunanza usuku lwabesifazana emhlabeni jikelele owenzelwe eKwamambo, eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso yeSAFAIDS wangenwa zinhlanganiso ezehlukeneyo.
Komunye njalo umbuthano oqondane laleli langa abenhlanganiso ye Institute for Democracy in Southern Africa-IDISA, bethule umbiko wabo wempumela yenhlolisiso abayenze phezu kodaba lombuso okhululekileyo eZimbabwe.
Emkhosini lo owenzelwe eBook Café eHarare ngolweSihlanu abe IDISA baveze ukuba abesifazana lokhe besesaba ukuphatheka kwezombusazwe njalo inane labo lisese phansi kakhulu ezikhundleni zobukhokheli.
Imikhosi yomibili ngeminye yemikhosi eyenziwe ilizwe lonke kunanzwa usuku lwabesifazana emhlabeni jikele olwe International Women’s Day. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwesihloko esithi A Promise is a Promise:Time for Action to End Violence Against Women .’
Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Kusenjalo, inhlanganiso ye Women’s Coalition of Zimbabwe layo ibiqoqe owayo umhlangano ngoLwesihlanu eHoliday Inn eHarare idingisisa amaqhinga okuqeda ukuhlukuluzwa kwabesifazana, ikakhulu ukudlwengulwa kwabantwana.
UNkosazana Thabitha Khumalo, obekulo umbuthano emele inhlanganiso kahulumende eye Joint Monitoring and Implementation Committee (JOMIC) utshele uSithandekile Mhlanga we Studio 7 ukuthi abesifazana bazatshengisela ngoMgqibelo elokitshini leRugare eHarare ngokuhlukuluzwa kwabesifazana.